Lisitry ny fifanakalozana feno OST Hadisoana sy olana amin'ny rakitra
Home Products DataNumen Exchange Recovery Lisitry ny hadisoana feno
Exchange OST Hadisoana sy olana amin'ny rakitra
Lisitr'ireo lesoka sy olana feno eo amin'ny fifanakalozana OST Files
Rehefa mampiasa Microsoft Outlook ianao hanokatra a ratsy or kamboty fampirimana ivelan'ny seranana (OST) rakitra, na ampifanaraho amin'ny mpizara Exchange, hihaona amina hafatra lesoka isan-karazany ianao, izay mety somary manjavozavo aminao. Noho izany, eto izahay dia hiezaka ny hanao lisitra ny lesoka rehetra mety, voalahatra arakaraka ny fahita matetika. Isaky ny lesoka tsirairay dia hilazalazana ny soritr'aretina misy azy izahay, hanazava ny antony marim-pototra ary hanome ny vahaolana, mba hahafantaranao tsara azy ireo. Etsy ambany dia hampiasa 'filename.ost'mba hanehoana ny fifanakalozana diso nataonao OST anaran'ny fisie.
“Tsy afaka manokatra ny mailaka misy anao. Ny fisie xxxx.ost Tsy fisie fampirimana ivelan'ny tsipika."
“Tsy afaka manitatra ilay fampirimana. Tsy azo nosokafana ny andiana lahatahiry. Ny lesoka dia mety ho hita tao amin'ilay rakitra xxxx.ost. Atsaharo ny rindranasa alefa mailaka rehetra, ary avy eo ampiasao ny fitaovana fanamboarana Inbox."
Mifanena amina entana marobe.
Tsy afaka manokatra entana Outlook manokana rehefa ivelan'ny Internet.
Hadisoana isan-karazany rehefa mampifandray ny boaty mailaka Exchange Server anao OST hametraka.
Ankoatr'izay, rehefa mampiasa fampirimana ivelan'ny tsipika (OST) apetraho amin'ny mpizara Microsoft Exchange, mety hahita olana manaraka matetika ihany koa ianao, izay azo vahana amin'ny DataNumen Exchange Recovery mora foana.
Diso voafafa ireo mailaka sy zavatra hafa ao amin'ny boaty mailaka Exchange.
Hanakalo fifanakalozana OST ataovy ao amin'ny fisie Outlook PST.
Ny Exchange dia ao anatin'ny maody fanarenana ankehitriny.
Oversized OST olan'ny rakitra (OST Ny haben'ny rakitra dia mahatratra na mihoatra ny fetra 2GB).